အမိမြေ သတင်းအဖွဲ့အမည်ခံ ငွေအလှူခံသူ ၈ ဦးကို ဖမ်းဆီး - Yuyalay
By YuYalaYPosted on May 20, 2019
မန္တလေး၊ မေ ၂၀
မန္တလေးတိုင်း ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း အမိမြေ သတင်းအဖွဲ့ အမည်ဖြင့် ငွေကြေးအလှူခံသူ ၈ ဦးကို မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးကာ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ပုသိမ်ကြီးမြို့မရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အမိမြေသတင်းအဖွဲ့ဟုဆိုကာ ကန်ကောက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်သို့ စာရွက်စာတမ်းအတုများဖြင့် အလှူခံနေစဉ် အိမ်ရှင်၏ တိုင်တန်းမှုကြောင်း ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
” ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို မကြာခဏ လာတတ်တယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နွယ်တဲ့ အလှူခံမျိုးလည်း လာတယ်။ အခု သတင်းမီဒီယာအမည်ခံပြီးတော့ ထပ်လာတယ်။ လာတဲ့သူတွေက သူတို့ချည်းပဲ။ လူကြီးဧည့်ခံဖို့အတွက် စားပွဲတစ်ဝိုင်းစာ နှစ်သိန်းနှုန်းနဲ့ သုံးဝိုင်းစာ လှူရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော်က သဒ္ဒါသလောက် လှူမယ်ဆိုတာ မရဘူး။ ဒါကြောင့် မသင်္ကာလို့ တိုင်လိုက်တာ ” ဟု ကန်ကောက်ရပ်ကွက်နေ ကိုမျိုး(ခ)ကိုမင်းအေးဆောင်က ရှင်းပြသည်။
အမိမြေ သတင်းအဖွဲ့ အမည်ခံ၍ ငွေကြေးလိမ်လည် အလှူခံသူများဖြစ်သည့် ဦးအောင်ဆွေမြင့်၊ ဦးမြင့်အောင်၊ ဦးတင့်ဇော်၊ ဦးအောင်ကျော်ထွန်း၊ ဦးမောင်ကြည်၊ ဦးလှမြင့်၊ ဦးမျိုးထွေးနှင့် ဦးဝေလင်းအောင်တို့ကို ပုသိမ်ကြီးမြို့မ ရဲစခန်းတွင် (ပ)၂၅၇/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၄၂၀/၄၆၈/၁၁၄ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးထားကြောင်း ပုသိမ်ကြီးမြို့မရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။
Photo – Ko Myo Credit – The Voice Journal
အမိမွေ သတငျးအဖှဲ့အမညျခံ ငှအေလှူခံသူ ၈ ဦးကို ဖမျးဆီး
မန်တလေး၊ မေ ၂၀
မန်တလေးတိုငျး ပုသိမျကွီးမွို့နယျအတှငျး အမိမွေ သတငျးအဖှဲ့ အမညျဖွငျ့ ငှကွေေးအလှူခံသူ ၈ ဦးကို မလေ ၁၉ ရကျနကေ့ ဖမျးဆီးကာ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး ပုသိမျကွီးမွို့မရဲစခနျး တာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောကွားသညျ။
အမိမွသေတငျးအဖှဲ့ဟုဆိုကာ ကနျကောကျရပျကှကျအတှငျးရှိ နအေိမျတဈအိမျသို့ စာရှကျစာတမျးအတုမြားဖွငျ့ အလှူခံနစေဉျ အိမျရှငျ၏ တိုငျတနျးမှုကွောငျး ဖမျးဆီးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
” ကြှနျတျောတို့ဘကျကို မကွာခဏ လာတတျတယျ။ ဘာသာရေးနဲ့ နှယျတဲ့ အလှူခံမြိုးလညျး လာတယျ။ အခု သတငျးမီဒီယာအမညျခံပွီးတော့ ထပျလာတယျ။ လာတဲ့သူတှကေ သူတို့ခညျြးပဲ။ လူကွီးဧညျ့ခံဖို့အတှကျ စားပှဲတဈဝိုငျးစာ နှဈသိနျးနှုနျးနဲ့ သုံးဝိုငျးစာ လှူရမယျလို့ ပွောတယျ။ ကြှနျတျောက သဒ်ဒါသလောကျ လှူမယျဆိုတာ မရဘူး။ ဒါကွောငျ့ မသင်ျကာလို့ တိုငျလိုကျတာ ” ဟု ကနျကောကျရပျကှကျနေ ကိုမြိုး(ခ)ကိုမငျးအေးဆောငျက ရှငျးပွသညျ။
အမိမွေ သတငျးအဖှဲ့ အမညျခံ၍ ငှကွေေးလိမျလညျ အလှူခံသူမြားဖွဈသညျ့ ဦးအောငျဆှမွေငျ့၊ ဦးမွငျ့အောငျ၊ ဦးတငျ့ဇျော၊ ဦးအောငျကြျောထှနျး၊ ဦးမောငျကွညျ၊ ဦးလှမွငျ့၊ ဦးမြိုးထှေးနှငျ့ ဦးဝလေငျးအောငျတို့ကို ပုသိမျကွီးမွို့မ ရဲစခနျးတှငျ (ပ)၂၅၇/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီးဥပဒပေုဒျမ ၄၂၀/၄၆၈/၁၁၄ တို့ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ ဖမျးဆီးထားကွောငျး ပုသိမျကွီးမွို့မရဲစခနျး တာဝနျရှိသူတဈဦးက ထပျလောငျးပွောဆိုသညျ။
Posted in Knowledge, ကြားသိရသမျှ
Previous post ငွေတွေ အများကြီးအကုန်ခံပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များတွက် သတင်းကောင်လေးမို့ ရှဲပေးပါ…!
Next post “အသက်ကြီး လို့…. ယောက်ျား ၊မိန်းမ ဝဖြိုးလာပြီး ….ဗိုက်ကြီးပူ လာခြင်းကို …..သက်ရင်းကြီးမြစ် နဲ့ …ရှင်းစို့ …!”
powered by Yuyalay